Hiran State - News: HS:-Wararkii ugu danbeeyey shirarka ay Mahiga iyo C/wali Gaas la leeyahiin jaaliyada Somaliyeed ee waqooyiga America,halkuuse ku danbeeyey afhayeenkii baarlamaanka ?
HS:-Wararkii ugu danbeeyey shirarka ay Mahiga iyo C/wali Gaas la leeyahiin jaaliyada Somaliyeed ee waqooyiga America,halkuuse ku danbeeyey afhayeenkii baarlamaanka ?
HS:-Wararkii ugu danbeeyey shirarka ay Mahiga iyo C/wali Gaas la leeyahiin jaaliyada Somaliyeed ee waqooyiga America,halkuuse ku danbeeyey afhayeenkii baarlamaanka ee marka uu waqooyiga America yimaado safarkiisa laga daremi jiray dhawr sano ka hor?
Dhibaatada laga dhaxlay dowladaha kumeel gaarka ayaa waxaa ugu horeeya inta hogaamineysa oo aan sharciga wadanka u degsan kumeel gaarba ha iska ahaadee aan ku dhaqmeyn amaba sideyba ka noqotay oo maba yaqaanaan.markaad eegto waftiyadii kala duwanaa ee ay kala hogaaminayeen Mahiga, Shariif Hasan, wasiirka arimaha dibada iyo C/wali Gaas iyo qaabka QM midoobay loogu soo dhaweyey waxaad ka soo qaataa dad African ah oo la bahdilay.
Anu ku hormarno Mahiga
Mahiga isagu waxaa laga dhageystay warbixin kedibna waxey aheyd inuu dib ugu laabto xafiiskiisii Kenya laakinse waxuu tartan kula jiraa waftiyada kale oo waxuu u muuqaal ek yahay madaxweyne Somaliyeed oo kale markaad aragto qaabkii uu u hadlayey shirkii uu kula kulmay Jaaliyada Toronto maalintii shaleyto aheyd.
Inkasta oo damiirkii Somalinimo ka dhintay qaar badan oo aqoonyahano isku sheega hadane shirkii uu Mahiga kula yeeshey Toronto muhiimadiisu waxey aheyd inuu qurba joogta kalsooni ka raadiyo isagoo yiri qurba joogta waa dad aan laga maarmi karin waxaan ku soo darayaa shirka wajigiisa labaad ee ka dhacaya Garoowe, hadaba waa Envoy howlahaasi hadii qurba joogta lagu soo darayo iyo hadii laga tashanayo sow ma ahan mid u taalo xukuamda kumeel gaarka ah maxeysa noqoneysaa shaqada Shiikh Shariif hadiiba sidan nin envoy ah ugu dhiiranayo.
Dad badan waxa laga yaabaa iney isweydiinayaan maxey tahay Mahiga ujeedaa uu ka leeyahay qurba joogta laakinse Mahiga xaalada iyo mustaqbalka Somaliya sida lala damacsan yahay ayuu ogyahay waxaa kale oo uu ogyahay inuusan xafiiska UNPOS isaga iyo inta ka hoos shaqeysa isbedel weyn lagu sameynayo inta aan la gaarin xiliga doorashada soo socota ee wadanka looga saarayo kumeel gaarka.
Waftiga C/wali Gaas isaga sidii la rabay looma soo dhaweyn intooda badana waftiyadii ka socday Somalida iyagaa qarashkooda iska soo bixiyey waxaana garoonka diyaaradaha New York ka soo qaaday dad shacab ah oo ay qaraabo yahiin intooda badan ma jirin hanan dowladeed iyo soo dhaweyn aanu u soo bandhigi karno umada Somaliyeed marka xaqiiqada laga hadlo.C/wali Gaas ayaa aad uga yaabiyey mid ka mid ah masuuliyinta Mareykan oo weydiiyey su'aal aheyd maxaad indhaha uga qabsaneysaan nidaamka maamul goboleedyada oo aad u xoojin weyseen oo aad Mogdisho oo kaliya ugu howl gashaan? waxuuna yiri ma jiraan maamul goboleedyo Somaliya waa 18 gobol Puntland ayaana ka ah wax maamul goboleed rasmi ah isagoo careysan ayuuna yiri cid aqoonsaneysa ma jirto wadanka anigaa ka ah r/wasaare. markii ay halkaasi mareyso ayuu hadane mar uu ka hadlayey VOA hadalkii waxooga reer magaleeyey oo ka daayey inuu afka ku dhufto Puntland oo kaliya maadama ay Somali badan dhageysanayaan, waana garan kartaa shirarka uu tagayo tirada ka soo qeyb galeysa sida ay aad uga yar yahiin tiradii soo dhaweyn jirtay hogaamiyaashii Somaliyeed ee isaga ka horeyey. taasina waxaa keenayo shacabkii oo hada il baxay oo u kala jabay qaar doonaya iney ka hirgaliyaan degaanadooda maamul goboleed iyo kuwa u arka TFGda iyo maamul goboleedba inuusan wax is dhaamin oo loomaba arko masuuliyiin dalka hogaaminaya taasi oo ah qaran jab weyn oo ku dhacay dalkii horey loo dhihi jiray Somaliweyn.
Afhayeenkii Shariif Hasan
Shariif Hasan hada waxuu ku sugan yahay Michigan oo sida la sheegay ay ka jogaan mid ka mid ah xaasaskiisa iyo caruurtiisa kedib markii uu dhib badan kala kulmay Tariin uu ka soo raacay New York ilaa magaalada uu u socday kedib markii abaabulayaasha shirka QM u sheegeen ineysan bixineyn qarashka waftiga Shariif Hasan maadama uusan ku imaan casuumaad oo uu iskiis u yimid safarka Mareykan.
Intii uusan tariinka raacin ayaa isaga iyo waftigiisa waxaa ka buuxsamay Busaska waaweyn ee iskaka kala koosha Mareykanka kedibna Hotel raqiis ahaa oo ay xitaa dhibaato ku qabeen AC-ka amaba qaboojiyaha oo aan sidaasi uga fogeyn xarunta QM ayey iska dageen ilaa markii danbe tariinkaan soo raacaan.hadaba muhiim maahan in aad meeshii aad doonto u raacdo diyaarad, tariin, baabuur laakinse waxey su'aashu tahay wadan kuwii hogaaminayey ay sidan u dhaqmayaan cida samata bixin doonta shacabka ku dhiban gudaha wadanka marba hadii siyaasadii guud ee dalka heerkan mareyso.
Sidoo kale marka aad aragto qudbadaha Mahiga ee u ka jor jeedinayo jaaliyada Somaliyeed marka uu hadlayo ma dhahayo waxaasi iyo waxasi ayaan TFGda kala hadleynaa si ay nooga caawiyaan iyo wax la mid ah. waxuu iska qadanayaa go,aano usan xitaa ku dhiiran karin hogaamiye Somaliyeed, markii laga soo baxay shirkii Mahiga ee Toronto dadka qaarkii waxey ka shalaaynayeen ineyba kulanka noocaani ah ku soo galaan lacag lagu qiyaasay 25 dolar qofkiiba oo laga qaaday dad kor u dhaafayey 120 ruux.qaarkoodna tikidho ayaaba u jarnaa oo shirka wajigisa labad ayey lahaayeen Mahiga Garoowe ayaan ku wada kulmi doonaa.
Marka aad aragto go,aanada Mahiga xaqiiqadii waxaa kuu soo baxeysa inuu Somaliya isaga madaxweyne ka yahay sida uu tirada laga dhigayo baarlamaanka cadadkeeda ugu dhiiran yahay inta ay noqoneyso markaad aragto iyo sida uu Soamliya ugu maleeyo dad cawaan ah oo aan kala garaneyn dowladnimadu waxey tahay marba hadii ay isaga shirarkisa ku galayaan lacag isagoo og in shaqadisu envoy oo kaliya tahay.
Ugu danbeyn Mahiga,C/wali Gaas iyo inta ka tirsan TFGda dhamaantood waa wada kumeel gaar marka waqtigooda ha qaateen ayuu yiri mid ka mid ah ka soo qeyb galayashii shirka Toronto.
dad badan waxey aad uga shaki qabaan sida uu Mahiga ugu dhagan yahay in shirka wadatashiga wajigiisa labaad lagu qabto Garoowe isagooba kaka dheereeya arintaas dadka ka soo jeeda Puntland inkastoo shaki la galinayo inuuba shirkaasi dhaco marba hadii baarlamaanka kumeel gaarka ah tiradiisa lagu dhimayo iyadooba la heli karo iyagoo Mogdisho jooga in la dhimo.
Laakinse siyaasi caan ah oo horey ugu soo shaqeeyey dowladahii soo maray dalka ka hor bur burkii ayaa sheegay in shirka wadatashiga wajigiisa labaad sharciyan uu joojin karo Shiikh Shariif awoodna u leeyahay inuu codsado in TFGda inta waqtigeeda ka dhiman lagu dhameeyo magaalada Mogdisho oo ah caasimadii Somaliya intii arimaha Somaliya nin envoy ah siduu doono ka yeeli lahaa. dabcan dadka aragtida fog wey u jeedaan inuu Mahiga dhax dabaalanayo siyaasado uusan shaqo ku laheyn una gaar ah umada Somaliyeed laakinse waxaa la rabaa cidii umada yac ka dhihi laheyd ayuu hadalkiisa sii raaciyey rugcadaagaan Somaliyeed.
Hadaan u soo laabano Shariif Hasan waxuu iska lumiyey fursado badan kedib markii uu shirkii Kampala aqbalay in TGFda sanad loogu daro isagoo u xishay dhaqaalo yar oo markaasi miiska saarnaa laakinse dadka qaarkii waxey leeyahiin kama fikirin mustaqbalka siyaasadiisa oo hada weyba cad tahay mudanayaashii uu gudoomiyaha u ahaa ayaa tiradooda la dhimayaa sabab la,aan marka Garoowe la tago.
Ugu danbeyn shaqsi kasta oo ka dhega adeyga in wadanka doorasho laga qabto isagoon rabin ayaa si qasab ah loogu dul qabanayaa xiligii kumeel gaarka ahaa ee ay mudada badan umada kuu soo jireena wax ka yar 6 bilood ayaa ka hartay.
· admin on September 18 2011 12:39:33 · 0 Comments · 2246 Reads ·
14,613,616 unique visits